Jamaica ikozvino nyika yakabatana zvakanyanya kubva kuSouth America
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Airlines » Jamaica ikozvino nyika yakabatana zvakanyanya kubva kuSouth America
Airlines • nhandare yendege • Nhau Nhau • Kuputsa Kufamba Nhau • Jamaica Kupwanya Nhau • nhau • Peru Kuvhuna Nhau • ushanyi • kutakura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Kufamba Wire Nhau • Akasiyana Nhau
Jamaica Tourism Gurukota, Hon. Edmund Bartlett, vazivisa ndege itsva kubva kuLima, Peru, kuenda kuMontego Bay yakavhurwa mangwanani ano.
Minister Bartlett naMinister Vasquez vapedza zvibvumirano kunhandare yeLima.
Iyo Lima hub ndiyo imwe yenyika hombe muSouth America uye ichaita Jamaica nyika yakabatana zvakanyanya kubva kuSouth America muCaribbean inotaura Chirungu. LATAM ndiyo ndege huru muSouth America.
Ndege ichatanga kutenderera kwemazuva matatu nhasi nevane 3 vafambi nevashandi vari muchikepe.
Kune dzimwe nhau nezveJamaica, tapota tapota apa.